सूरज पैलेस स्टोर
सूर्य दरबार क्यासिनो बोनस कोड | सर्वश्रेष्ठ सूर्य दरबार क्यासिनो कुनै निक्षेप बोनस सूर्य दरबार क्यासिनो फ्रि चिप | सूर्य दरबार क्यासिनो फ्री स्पिनहरू, 2020 #1
यो प्रस्ताव केवल सूर्य पैलेस क्यासिनोमा पहिलो-पटक जम्माकर्ताहरूको लागि मान्य छ।
यो प्रस्ताव प्रति परिवार एक / एक कम्प्युटर र एक कम्प्युटरमा सीमित छ।
कुपनले एक पटक प्लेयरलाई बोनसमा अधिकतम $ 500 मा मात्र रिडिम गर्न सकिन्छ।
यो बोनसको लागि योग्य गर्न न्यूनतम $ 20 जम्मा गर्नुहोस्।
खरिद र अनुमति बोनस गर्नु अघि पचास (50) पटक बिर्जित हुनुपर्छ।
केवल निम्न खेल बोनस को wagering आवश्यकताहरु को लागी गणना: केहि रियल भिडियो स्लॉट, केहि स्लॉट, keno र स्क्रैच कार्डहरू।
प्रतिबन्धित खेलहरूमा Wagering ले wagering आवश्यकताहरूको पूर्ति र गोलहरूको खेलमा खेल्ने राउन्डहरू जित्न सकेन वा फर्काउने आवश्यकताहरू पूरा नगरेसम्म नगद आउट अनुरोधको समयमा हटाइनेछ।
बोनस चिप्सहरू अविश्वसनीय छन् र सम्बन्धित नकआउटबाट हटाइनेछ।
कृपया नकद आउट गर्नको लागि सामान्य नियमहरू, नियमहरू र सबै प्रमोशनहरू र बोनसहरूका लागि जाँच गर्नुहोस्।
सूर्य प्यालेस क्यासिनो कुनै पनि समयमा यस प्रस्तावको सर्तहरू र सर्तहरू परिवर्तन गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्दछ र यो तपाईंको समय-समयमा परिवर्तन र अद्यावधिकहरूको लागि समय-समयमा जाँच गर्न जिम्मेवारी हो।
एक विवादको घटनामा, कैसीनो द्वारा बनाईएको सबै निर्णयहरू अन्तिम हुनेछन्।
कैसीनो नियमहरू वा बोनस सर्तहरू तोड्ने यो बोनसहरू र सम्बन्धित विन्निहरू आवाज उठाउँछन्।
200% डबल मिलान बोनस सर्तहरू
न्यूनतम जम्मा: $ 20
अधिकतम बोनस: $ 2,000
Wagering आवश्यकताहरु: तपाईलाई हटाउनको लागि तपाईले जम्मा गर्नु पर्छ 40 पटक तपाईंको जम्मा र वैध गेमहरूमा बोनस।
150% जम्मा जमा बोनस (आईडीबीएसएनएनएनएएनएपीएलएक्स, 150BONUS)
अधिकतम बोनस: $ 3,000
तपाईंको बोनस फिर्ता लिनका लागी, भुक्तानी र जम्मा रकम तपाईले जम्मा गर्नु पर्छ 40 पटक तपाईंको जम्मा र वैध खेलहरूमा बोनस।
यदि बहुभाषी भिडीयो पोकर वा भिडियो पोकर प्ले गर्दै, wagering आवश्यकताहरू 90 पटक तपाईंको जम्मा र बोनसमा वृद्धि हुन्छ।
लाइभ डीलर खेलहरूमा विजेताहरू, क्रेप्स, भेगास तीन कार्ड रमी, त्रि कार्ड पोकर, क्यारिबियन होल्डम, Baccarat, रूले, SicBo, ब्ल्याक जैक वा 21 खेलहरू वार्ज आवश्यकताहरूमा लागू गर्न सकिँदैन।
प्रचारहरू र यो वा कुनै अन्य प्रोमोशनल कुपन कोडको प्रयोग वा छुटकारा कुनै पनि समय क्यासिनो निर्णयमा विस्तार वा सीमित हुन सक्छ। प्रचारहरू सीमित समयको लागि चल्छ र बिना सूचना बिना बन्द हुन सक्छ। कैसीनो पूर्व सूचना बिना कुनै खातामा बोनस वा कम्पक्स पैसाको प्रयोग रोक्न, असक्षम वा अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ।
EUROPE बाट खेलाडीहरू: सबै बोनस र पदोन्नतिहरूलाई नगद बाहिर निस्कने वा कुनै पनि फिर्ता अनुरोध प्रसोधन गर्नु अघि डबल wagering खेलको आवश्यकता छ। कुनै पनि ईन्टिन जुन कुनै पनि बोनसको लागि आवश्यक दुग्ध प्लेथ्रको अनुपालन गर्दैन, शून्य हुनेछ।
150 को लागि शर्त र शर्त बोनस र अन्य बोनस र प्रमोशन
* यस तालिकामा विशेष गरी कुनै पनि अन्य खेलहरू सूचीबद्ध छैन।
** टाइम्स जम्मा राशि + बोनस रकम।
**** प्रबन्धकहरूले wagering आवश्यकताहरूको पूर्तिको लागि गणना गर्दैनन्।
सोमबार नगद फिर्ता विशेषाधिकार:
हरेक मङ्गलबार तपाईले 20% प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ 00 को बीचमा तपाईका सबै भण्डारहरूको नगद रकम फिर्ता: फिर्ता 00: 00 AM र 23: 59: 59 PM CST! नगद फिर्ता पछाडि पैसा तपाईंको खातामा जम्मा गरिएको छ; तपाईं यसलाई खेल्न वा हटाउन अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ (न्यूनतम फिर्ता $ 150, अधिकतम फिर्ता $ 1,000)। "कुनै पनि प्लेलिस्ट आवश्यक छैन"
यस पदोन्नतिबाट व्युत्पन्न विनाशहरू शून्य हुनेछ र बोनस ब्यालेन्स फर्काउन सकिने रकममा परिवर्तित भएपछि एक पल्ट, $ 1000.00 भन्दा बढि विनिमेट स्वचालित रूपमा कटौती गरिनेछ।
यस विशिष्ट बोनसका लागि केही प्रतिबन्धहरू र सीमाहरू लागू हुन सक्छन्:
अधिकतम बोनस रकम $ 500।
केवल क्रेडिट कार्ड प्रमाणिकरणको साथ खाताहरूको लागि।
यो प्रति खाता केवल एक पटक जम्मा गर्न सकिन्छ।
यस विशेष भण्डारबाट व्युत्पन्न विनिङ वा निकासी अनुरोधहरू संग जम्मा यस पदोन्नतिको लागि आवेदन गर्दैन।
थप प्रतिबन्ध खाता खाता र समग्र नेट जम्मामा आधारित लागू हुन सक्छ।
मासिक बोनस पदोन्नति:
यो पदोन्नति राम्रो स्टैंडमा खाताको लागि वैध छ, एक पटक प्रति महिना।
नियमित Wagering र नगद बाहिर आवश्यकताहरू।
सक्रिय सदस्यहरू मात्र एक पटक।
केही बोनस र सीमाहरू यस बोनसका लागि आवेदन गर्न सक्छन्।
सिजन बोनस पदोन्नति:
यो पदोन्नति सोमबारमा सुरु हुन्छ, हरेक दुई हप्ता, एक पटक मात्रै।
केही बोनस र सीमाहरू यस बोनसका लागि आवेदन गर्न सक्छन्
जन्मदिनको बोनस पदोन्नति:
यो पदोन्नति एक पटक एक पटक जम्मा गर्न सकिन्छ।
सालगिरह बोनस पदोन्नति:
$ 1,000 साप्ताहिक REWARD ... यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
द्रुत प्रमाणिकरण बोनस ... यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
सूर्य पैलेस कैसीनो वफादार कार्यक्रम ... यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
एक मित्र पदोन्नतिको सन्दर्भ गर्नुहोस् ... यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
सूर्य पैलेस कैसीनो बोनस दिन
सबै नि: शुल्क पैसा अफरहरू हाम्रो सन्दर्भमा नि: शुल्क परीक्षण सर्तहरूको अधीनमा छन्। डिपोभेशन प्रवर्धन एउटै नियम र सर्तहरू र हाम्रो डबल म्याच बोनसको रूपमा wagering आवश्यकताहरूसँग सम्बन्धित छ। केवल आमन्त्रित अमेरिकी खेलाडीहरूको लागि मान्य प्रस्ताव गर्नुहोस्।
निःशुल्क ट्रायल सर्तहरू
पार्टनर साइटबाट आउँदा मात्र रिडिम गर्न सकिन्छ र रिडिम गर्नका लागि कूपन चाहिन्छ।
स्लॉट (प्रगतिशील बाहेक), केनो, र स्क्रैच टिकटहरू मात्र।
यी बोनस निषेधहरू खेल्दा कुनै पनि अन्य खेल खेल्न अनुमति छैन।
बोनसलाई 70 पटक हटाउन अघि वैध व्यानरहरूमा भोग्नु पर्छ।
अधिकतम बोनस निकाल्ने $ 50 हो। बोनस गैर नगद योग्य छ र बोनसको रकम फिर्ताबाट कटौती गरिनेछ।
यस बोनस समूहको एक क्यासिनोमा प्रति व्यक्ति मात्र प्रयोग गर्न सकिन्छ।
एक पटक भन्दा बढी दाबी गर्दै कुनै पनि विन्निहरू खाली हुनेछ।
प्रशोधन निकाल्न सम्बन्धित लागतहरूको कारण, न्यूनतम फिर्ता $ 50 हो। नि: शुल्क परीक्षण अमेरिका र क्यानाडाका खेलाडीहरू मात्र उपलब्ध छन्।
Winnings को निकासी को लागि अनुरोध मा, प्लेयर सिस्टम मा खाता सत्यापित गर्न कम से कम एक जम्मा हुनेछ। हटाउने न्यूनतम रकम $ 150 बाट सुरु हुन्छ; त्यसमा निम्नले, खेलाडीलाई रकम जम्मा गर्न आवश्यक छ, न्यूनतम रकम रकम बीचको अंतरको बराबर र अधिकतम जम्मा नगद निक्षेप बोनस बाट जितिएको (जब सम्म अन्यथा भनिएको छैन)। राखिएको डिपुडको रकम थप रकमको रकममा नगद रकमको लागी रकम फिर्ताको लागी रकमको भुक्तानीमा रहेको रकमको लागी हुनेछ। ** (यो नि: शुल्क परीक्षण सर्तहरू र सर्तहरूमा पनि जान्छ)।
टूर्नामेंट सर्तहरू र शर्तहरू
1। टूर्नामेंटहरूमा प्रयोग गरिएका जम्मा बोनसहरूको लागि योग्य छैन।
2। टूर्नामेंट खरीद-इनको लागि बोनस कोष र कम् प्वाइन्टहरू प्रयोग गर्न सकिँदैन। यदि बोनस कोष प्रयोग गरिएमा कुनै पनि ईन्टिनहरू शून्य हो।
3। प्राविधिक समस्याको घटनामा हामी टूर्नामेंट नतिजाहरू र फिर्ता रकम खरीद-इन्स, यदि कुनै पनि हो भने अधिकार सुरक्षित गर्छौं। हाम्रो अधिकतम दायित्व तपाईंको खरीद-इन को बराबर छ।
$ 20 FREE COUPON (कूपन 20FREECASH)
स्लॉट (प्रगतिशील बाहेक) मात्र। यी बोनस निषेधहरू खेल्दा कुनै पनि अन्य खेल खेल्न अनुमति छैन।
यस बोनसको दाबी गर्दा एक पटक भन्दा बढी कुनै पनि ईनिङहरू रद्द हुनेछ।
प्रशोधन निकासीहरूसँग सम्बन्धित लागतहरूको कारण, न्यूनतम फिर्ता $ 50 हो।
यो प्रस्ताव US र क्यानाडा खेलाडीहरू मात्र उपलब्ध छ।
के तपाईलाई जवाफ दिईएको प्रश्न छ? हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र हामी 24 घण्टा भित्र जवाफ दिनेछौँ।
$ 20 नि: शुल्क स्पिन (कूपन 20FREESPINS)
स्लॉट मात्र यी बोनस निषेधहरू खेल्दा कुनै पनि अन्य खेल खेल्न अनुमति छैन।
नि: शुल्क स्पिन विन्निङहरू 70 पटक हटाउन अघि वैध विर्ताहरूमा बिग्रिनु पर्छ।
अधिकतम फिर्ता $ 50 हो।
सबै पदोन्नति र बोनसका लागि सामान्य सर्तहरू, नियम र नियम
कुनै पनि उपलब्ध पदोन्नति वा बोनसमा भाग लिन न्यूनतम जमा $ 20.00 हो
सबै प्रमोशनहरू मात्र विशेष कूपन कोडहरूको प्रयोग गरेर दावी वा छुट्याइएको हुन सक्छ, जुन क्याषीमा जम्मा गर्नु प्रविष्ट गर्नु पर्छ। अन्यथा पदोन्नति लागू हुनेछैन। विवरणहरूको लागि, कृपया हाम्रो समर्थन कर्मचारीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
तपाईंको बोनस, winnings र जमा रकम नगद नगद बाहिर निकासी आवश्यकताहरूको अधीन छ। प्रत्येक बोनस सावधानीपूर्वक सर्तहरू र सर्तहरू पढ्नुहोस्। यसको अतिरिक्त, प्रत्येक बोनस सामान्य नियम र नियमको अधीनमा छ।
यदि तपाइँसँग हाल खाताको ब्यालेन्स वा पेन्डिङ पेन्डिङ छ भने, कृपया हाम्रो बोनस र प्रमोशनको साथ कसरी अगाडि बढाउने निर्देशनहरूको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
महत्त्वपूर्ण: कुनैपनि व्यक्ति वा समूहका क्यासिनोहरू हटाउन वा कुनै पनि प्रकारको सिंडिकेट बिटमा संलग्न गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूको जम्मा, बोनस र विजेताहरू फर्काउने व्यक्तिहरूको समूह। यसमा समावेश छ, तर सीमित छैन, प्रारम्भिक जम्मा बोनस एकाधिक पटक दावी गर्ने प्रयासमा बहु खाताहरू खोल्दछ।
1-क्यासिनोले 180 दिन भित्र कुनै गतिविधि छैन जुन कुनै पनि खाता बन्द गर्ने अधिकार छ। शर्त राख्नु नगर्ने, डिपेसन वा फिर्ता नगर्ने, वा खातामा पहुँच नगर्ने, यस अवधि भित्र, उदाहरणहरू मानिन्छ, तर अनन्य रूपमा, खाता निष्क्रियता र फलस्वरूप, कुनै पनि ब्यालेन्स फोर्ज गरिएको छ।
2- बोनस पैसाको प्रयोग (कुनै पनि प्रकार कुपन वा म्यानुअल क्रेडिट) मनोरञ्जन उद्देश्यको लागि मात्र हो। कैसीनो बोनसहरूको दुरुपयोगलाई विचार गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्दछ जब पेशेवर खेलाडीहरू वा समूहहरूले हाम्रो बोनस कार्यक्रमको दुरुपयोग वा लाभ उठाउँदैछन्। यस अवस्थामा, केवल बोनस सुविधा न केवल निलम्बित हुन सक्छ, तर पनि, यस्तो व्यवहारमा आधारित मजदुरहरूको कुनै पनि विवेक फर्जी गरिएको छ। यो कार्य वा दुर्व्यवहारले खेलाडीको खाता निलम्बन गर्न र थप पहुँच रोक्न पनि प्राप्त गर्दछ।
3- कुनै पनि पैसाहरू बोनस पैसाबाट आउँदैछ, खाताहरूमा जुन अन्तिम जम्मा तीन महिना भन्दा पुरानो छ, अवैध रूपमा मानिन्छ र खेलाडी द्वारा फोहोरिएको छ, र कुनै पनि प्रक्रियाहरू प्रशोधन गरिनेछ। यस अवस्थामा, कुनै पनि ब्यालेन्स खाताबाट हटाइनेछ।
4- बोनसको पैसा खेल्ने बेला, यसको कुनै पनि प्रकारमा, अधिकतम शर्त राशि $ 20.00 हो, वा कुनै पनि वेतन रेखामा वा कुनै पनि खेलमा उत्सुक छ। शर्तहरू बाट आउने कुनै पनि विनाशहरू जुन अधिकतम सीमा भन्दा उच्च छन्, बोनस पैसा प्रयोग गर्दा, आंशिक वा पूर्ण रूपमा, शून्य हो र कुनै पनि प्रक्रियालाई प्रशोधन गर्न सकिदैन। यस अवस्थामा, क्यासिनोको एकमात्र विवेकमा कुनै पनि सन्तुलन हटाउन सकिन्छ।
5- अन्यथा कैसीनो द्वारा निर्दिष्ट नभएसम्म; सबै प्रोमोशनल फंड (बोनस रकम) wagering पूरा गर्न घर मा रहन। बोनस पैसा खेल बढाउन र winnings उत्पन्न गर्न मद्दत गर्न कार्य गर्दछ; तथापि, winnings को भाग को रूप मा फिर्ता ले सकते नहीं। बोनस खातामा फिर्ता गरिने छैन तर क्यासिनोबाट निकाल्नबाट भिनिबाट कटौती गरिनेछ। Winnings बाहिर नगदको बिन्दुमा, सबै बोनस पैसा क्यासिनोमा प्ले गरेर जम्मा कुल रकमबाट हटाइनेछ।
6- बोनस पैसाको साथ बजाउँदा सबै अवस्थाहरूमा अधिकतम नगद बाहिर लागू हुन्छ, यसको कुनैपनि प्रकारको, वा कुपन वा म्यानुअल क्रेडिटहरू, जबसम्म अन्यथा एक विशेष पदोन्नति वा अभियानको लागि भनिएको छैन। 250% वा बढी भन्दा जम्मा कुनै पनि जम्मा बोनस कूपनका लागि, अधिकतम अनुमति प्राप्त रकम 20 को राशि हो जुन जम्मा रकम (जम्मा रकम प्रति अनुमति $ 5,000.00 $ सबै NNNX हुनेछ र सबै खेलाडीहरूमा $ कक्षामा निर्भर हुनेछ, $ 250.00 को जम्मा रकमको आधारमा , विशेष पदोन्नतिको लागि फरक नभए अनुसार), र 20 समय, जम्मा रकम, जब बोनस दिइएको 249% भन्दा कम प्रतिनिधित्व गर्दछ (अधिकतम नगद बाहिर अनुमति सबै रकमहरू र निर्भर खेलाडी वर्गमा $ 10,000.00 हुनेछ, को जम्मा रकमको आधारमा हुनेछ। $ 500.00, जब सम्म विशिष्ट पदोन्नतिको लागि फरक फरक छैन)। विशेष गरी ब्लेक/ 21 खेल पदोन्नति, अधिकतम अनुमति प्राप्त फिर्ता 20 को योगफल हो जुन जम्मा रकम (सबै भन्दा बढी नकद अनुमति अनुमति $ 2,000.00 $ सबै NNX मा हुनेछ र प्लेयर वर्गमा निर्भर हुनेछ, $ 100.00 को जम्मा रकमको आधारमा, जबसम्म फरक विशिष्ट पदोन्नति) अधिकतम नगद बाहिर (एमसीओ) भन्दा बढी सबै शेषहरू ध्वनी गरिनेछ र खेलाडीको खाताबाट कटौती गरिनेछ। एकपटक भगेरी आवश्यकताहरू एक खेलाडीसँग भेट भएपछि एक पटक उनीहरूको रकम अनुरोध गर्न सक्छ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि यदि कुनै पनि खेलाडीले नगद बाहिर कुनै पनि खेलाडी खेल्न जारी राख्छ भने कुनै अतिरिक्त winnings खाली गरिनेछ र फर्काउनुहोस्।
निःशुल्क बोनसहरूको लागि 7-: विन्निको हटाउनको लागि अनुरोध गर्दा, प्लेयरले खातामा खाता प्रमाणित गर्न कम्तिमा एक जम्मा गर्नेछ। हटाउने न्यूनतम रकम $ 150 बाट सुरु हुन्छ; त्यसमा निम्नले, खेलाडीलाई रकम जम्मा गर्न आवश्यक छ, न्यूनतम रकम रकम बीचको अंतरको बराबर र अधिकतम जम्मा नगद निक्षेप बोनस बाट जितिएको (जब सम्म अन्यथा भनिएको छैन)। राखिएका डिपुडको रकम थप रकमको रकममा नगद रकमको लागि अनुरोध गर्नु भन्दा पहिला जम्मा रकमको अनुहारमा दाईको अधीन हुनेछ।
8- Comp बिन्दुहरू कुनै पनि गेममा प्लेको लागि विशेष श्रेयहरू छन्, जुन प्रत्येक शर्तको लागि चयन गरिएको खेलमा आधारित हुन्छ। यी बिन्दुहरूलाई रिडिम गर्न सकिन्छ र हटाउन सकिने ब्यालेन्समा बदलिन्छ, र एक पटक त्यहाँ कम्तिमा 100 कम्पाइडहरू मिलाईएको छ। अधिकतम नगद बाहिर अनुमति अनुमति5को राशि छुटाइएको कम्पोज्स को राशि। कुनै अधिक अनुरोध अनुरोध शून्य छ।
9- मान्य इमेल र गृह ठेगानाहरूसँग मात्र प्रमाणिकरण क्यासिनो खाताहरूले बोनस दावी गर्न अनुमति दिएको छ।
10- पदोन्नतिहरू केवल मान्य खाताहरूमा मान्य हो।
11- कुनै प्रमोशनहरू संयुक्त हुन सक्दछन्, नभएसम्म अन्यथा तोकिएको छैन।
12- प्रचारहरू सीमित समयको लागि चल्छ र नोटिस बिना परिवर्तन वा बन्द हुन सक्छ। क्यासिनो बिना कुनै सूचना बिना कुनै विशेष खातामा बोनस वा कम्पक्स पैसा प्रयोग गर्न, असक्षम, असक्षम वा अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ।
13- एक बोनस प्रति व्यक्ति, IP ठेगाना, परिवार, परिवार र / वा समुहलाई सीमित गर्नुहोस्। क्यासिनो प्रमोशनहरूबाट व्युत्पन्न विन्निङ वा खाताहरूमा बोनस पैसा डुप्लिकेटहरू मानिने मानिन्छ। क्यासिनोले आफ्नो विवेकमा प्लेयरको ब्यालेन्सबाट बोनस कटौती गर्ने अधिकारलाई सुरक्षित गर्दछ।
14- बहु बहु भिडियो पोकर वा भिडियो पोकर खेल्दै भने, wagering आवश्यकताहरू वृद्धि हुनेछ। कृपया तालिका जाँच गर्नुहोस्।
15- CRAPS को कुनै पनि प्रकार, CARIBBEAN होल्ड'EM - स्टूड र ड्रवा, ट्रियर कार्ड पोकर, तीन कार्ड ढिलो, ब्ल्याक जैक, "21" खेलहरू, PONTOON, BACCARAT, ROULETTE, एसआईसी बो, प्रक्षेपण गेम, केहि स्लॉट्स गेम र लाइव डीलर गेम्स कुनै पनि बोनस को न्यूनतम वेगिंग आवश्यकताहरु को लागी लागू नहीं हुन्छन् जब सम्म अन्यथा भनिएको छैन। विशिष्ट बोनसले थप प्रतिबन्धित खेलहरू हुन सक्छ। प्रतिबन्धित खेलहरूमा Wagering ले wagering आवश्यकताहरु को पूर्ति र गणना को खेलहरुमा खेले राउन्ड को जीत को लागी गिनती छैन कि नकद आउट अनुरोध को समयमा विगारिंग आवश्यकताहरु लाई हटाई जान सक्छ।
16- जम्मा बोनसको लागि योग्य छैन जब विचाराधीन वा अनुमोदित निकायहरू त्यस विशिष्ट जम्मा गरी आउँदछ वा उत्पादन गरीन्छन्। यसको अलावा, बहु-चरण प्रमोशनहरू र / वा पदोन्नतिहरूलाई धेरै पटक प्रदान गरिने बन्द गरिनेछ जसलाई खेलाडीले winnings उत्पादन गर्दछ - अर्थको समान पदोन्नतिका थप चरणहरू लागू हुनेछैनन्।
17- Comp बिन्दुहरू वा तुलना ब्यालेन्सहरूको प्रयोग wagered रकममा निर्भर गर्दछ। प्रत्येक 100 Comp बिन्दु $ 1.00 मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। प्रत्येक विजेताका लागि सम्मानित बिन्दुहरूले खेल र खेलाडी वर्गमा निर्भर गर्दछ र यो 8.00 कम्को बिन्दु प्राप्त गर्न $ 15.00 देखि $ 1 को लागि wagers मा भिन्न हुन सक्छ।
18- यदि तपाइँ बोनसमा भाग लिन चाहानुहुन्छ भने तपाईले तपाइँको डिप्रेसन गर्न भन्दा पहिले कैशियरमा कुपन रद्द गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाइँ पहिले नै जम्मा भएको छ भने प्ले गर्नु अघि बोनस कोष हटाउनको लागि [email protected] इमेल गर्नुहोस्। यदि तपाईं कुनै पनि बोनस प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने कृपया [email protected] को आफ्नो अनुरोध इमेल गर्नुहोस्
19- कम्पनीले भुक्तानी जारी गर्नु अघि समेत तपाईंको पहिचानको प्रमाणीकरणको माग गर्न अधिकारलाई सुरक्षित गर्दछ। यसमा समावेश हुन सक्छ तर आईडी, उपयोग बिल, क्रेडिट कार्डको अगाडि र पछाडिको प्रतिमा सीमित छैन, र एक साइन-इन क्रेडिट कार्ड डिपिगरेसन फारम। यदि धोखाधडी वा कागजात छेउमा छ भने संदिग्ध व्यवस्थापनले नोटारित कागजातहरूको आवश्यकता पर्दछ। साथै, उपहार कार्डहरू प्रयोग भएमा, यी कागजातहरू उपहार कार्ड रिसेलर र / वा दूरसंचार वा क्रेडिट कार्ड प्रशोधन प्रदायकमा प्रदान गर्न सकिन्छ यदि प्रमाणपत्रलाई वास्तविक क्रेडिट कार्ड लेनदेन वैध कार्डधारक द्वारा बनाईएको हो।
20- तपाईंले आफ्नो डिपो बोनस प्राप्त गर्नको लागि योग्य हुन अघि कुपन कोड प्रविष्ट गर्नुपर्छ। यदि एक विशेष पदोन्नतिमा लागू भएमा, तपाईंले पदोन्नतिसँग मेल खाने कुपन कोड प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ, तपाईंले प्रयोग गरिरहनु भएको जम्मा विधि र तपाईंको भौगोलिक स्थान अनुसार। अन्यथा गलत कुपनबाट व्युत्पन्न कुनै पनि ईन्टिनहरू खाली गर्न सक्दछ।
21- बोनस पैसा (कुपन कोड वा म्यानुअल क्रेडिटहरू) लाइभ बिक्रेता खेलहरूमा प्ले गर्न सकिदैन। अपवाद बिना, कुनै पनि रूपमा बोनस पैसाबाट आउन कुनै पनि विन्निङहरू, भ्यागुङ आवश्यकताहरू भेट्न पछि पनि, लाइभ डीलर प्लेटफार्म भित्र कुनै गेममा प्ले गर्न प्रयोग गर्न सकिदैन। अघिल्लो बोनस पैसाबाट प्रत्यक्ष डीलर गेम्समा उत्पादन गरिएका कुनै पनि ईन्निङहरू, शून्य हुनेछन् र खेलाडीले सबै आयहरू फर्काउँछ।
22- युरोपबाट खेलाडीहरू: सबै बोनसहरू र प्रचारहरू को लागी नगद बाहिर वा कुनै पनि फिर्ता अनुरोध प्रशोधन गर्नु अघि डबल wagering खेलको आवश्यकता छ। कुनै पनि ईन्टिन जुन कुनै पनि बोनसको लागि आवश्यक दुग्ध प्लेथ्रको अनुपालन गर्दैन, शून्य हुनेछ।
सूर्य प्यालेस क्यासिनो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर, र तपाइँलाई (प्लेयर ') 18 वर्ष पुरानो वा बढी उपलब्ध गराइदिन्छ, तपाईले सूर्य पैलेस क्यासिनोको साथ निम्न सम्झौतामा प्रवेश गर्न आफ्नो सहमति प्रकट गर्नुहुनेछ र यसको सर्तहरू र सर्तहरू स्वीकार गर्न सक्नुहुनेछ। । कृपया सम्झौता सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस्, र तपाईंको अधिकार क्षेत्रमा कानुनी सल्लाहलाई सल्लाह दिनुहोस् यदि तपाईंको अधिकार र दायित्वको बारेमा कुनै शङ्का छ भने; तपाईंको रेकर्डको लागि प्रतिलिपि राख्न निश्चित हुनुहोस्।
यस सम्झौताको उद्देश्य सूर्य पैलेस क्यासिनो र खेलाडीले सूर्य पैलेस क्यासिनो.ईउ बाट प्लेयरलाई सूर्य प्यालेस क्यासिनो सफ्टवेयर प्राप्त गरेपछि खेलाडीको सम्बन्ध सम्बन्धी कानूनी सम्बन्धलाई विनियमित गर्दै। सन पैलेस क्यासिनो यसका लागि कैसीनोमा खेल्ने सफ्टवेयर प्रयोग गर्नको लागि प्लेयरलाई व्यक्तिगत, गैर-विशेष, गैर-स्थानान्तरण योग्य, उप-इजाजतपत्र प्रदान गर्दछ।
खेलाडी द्वारा घोषणा
खेलाडीले घोषणा गर्छ र वार गर्ने गर्छ कि:
खेलाडीका सबै विवरणहरू सूर्य पैलेस क्यासिनोमा प्रस्तुत दर्ता फारममा निहित सत्य र सही हो।
प्लेयरले आफ्नै निजी व्यक्तिगत प्रयोगको लागि र कुनै पनि व्यावसायिक प्रयोगको लागि, वा अरूद्वारा प्रयोग गर्न इन्टरनेटमा जुवा गर्न सफ्टवेयर अनुप्रयोग प्रयोग गर्नेछ।
सूर्य पैलेस क्यासिनो सफ्टवेयरको व्यावसायिक प्रयोग सख्त रूपमा निषेधित गरिएको छ।
आफ्नो ज्ञानको सबै भन्दा राम्रो गर्न, प्लेयर इन्टरनेटमा जुवा गर्न सफ्टवेयर प्रयोग गरी प्लेयरको आफ्नो गृह क्षेत्रको कुनै पनि नियमको उल्लङ्घन गर्दैन।
खेलाडीले सफ्टवेयरको आवेदन मार्फत इन्टरनेट जुआ को पद्धतिहरु, नियमहरु र प्रक्रियाहरु पुरा तरिकाले बुझ्दछ।
खेलाडी इन्टरनेटमा जुआ गर्दा सफ्टवेयरको अनुप्रयोग मार्फत पैसा गुमाउनुको जोखिममा पूर्णतया सजग हुन्छ।
प्लेयरले सूर्य प्यालेस क्यासिनो खेल सर्भरबाट ग्राहक अनुप्रयोगमा प्राप्त गरेको खेल परिणामहरूको सबै परिणाम स्वीकार गर्दछ। प्लेयर पूर्णतया स्वीकार गर्दछ र सहमत गर्दछ कि सफ्टवेयर अनियमित नम्बर जनरेटर खेलहरूको परिणाम निर्धारण गर्नेछ।
सफ्टवेयरको आवेदन गरेर इन्टरनेटमा जुआको लागि प्रयोग गरीएको धनको स्रोत गैरकानूनी छैन।
खेलाडी प्लेयरको गृह देश वा देशमा खेलाडीमा रहेका खेलाडीहरू, यदि कुनै पनि हो भने कुनै पनि र सबै कर भुक्तानीको लागि मात्र जिम्मेवार छ। खेलाडीहरू सूर्य प्यालेस क्यासिनो सफ्टवेयरको प्रयोगको परिणामस्वरूप।
सूर्य प्यालेस क्यासिनो द्वारा घोषणा
सूर्य पैलेस क्यासिनोले घोषणा गर्छ र वार गर्ने गर्छ कि:
भर्चुअल क्यासिनो जुआको सूर्य पैलेस क्यासिनोका लागि मात्र निर्देशकहरूको निर्देशन दिइएको छ जुन तिनीहरूको घरको अधिकार क्षेत्रका कानुनले सफ्टवेयरको आवेदनबाट इन्टरनेटमा जुआबाट निषेध गर्दछ। सूर्य पैलेस क्यासिनो प्लेयरको गृह अधिकार क्षेत्रमा कुनै पनि कानूनको विरोधमा इन्टरनेटमा जुआको लागि thesoftware लागू गर्न प्लेयर सक्षम गर्न कुनै पनि उद्देश्य छैन।
इन्टरनेटमा जुआको लागि सफ्टवेयरको अनुप्रयोगले प्लेयर रमाइलो र उचित भित्रीहरू ('अटलांटिक सिटी, लास वेगास नियम' वा अझ राम्रो) सुनिश्चित गर्छ।
नवीनतम निजी / सार्वजनिक कुञ्जी इन्क्रिप्सन प्रयोग गर्दै, सूर्य प्यालेस क्यासिनोले सबैको उचित प्रयास गरेको छ कि खेलाडी द्वारा नियन्त्रित सबै पासवर्डहरू र प्रयोगकर्ता नाम तेस्रो पक्ष पहुँच विरुद्ध सुरक्षित हुँदा इन्टरनेटमा स्थानान्तरण गरिन्छ।
प्लेयर द्वारा सफ्टवेयर को आवेदन विशेष रूप देखि, र सफ्टवेयर मा विस्तृत सूर्य पैलेस कैसीनो को सामान्य नियम, र / या सूर्य पैलेस कैसीनो को इंटरनेट वेब साइट को अनुसार, समय को अनुसार, बिना सीमा जुआ विधिहरूको सन्दर्भमा, नियमहरू, भुक्तान प्रक्रियाहरू, र winnings को भुक्तानी बजाउने।
दूरसंचार सेवा प्रदायक
सूर्य प्यालेस क्यासिनो, कुनै पनि तरिकामा, प्लेयरको इन्टरनेट सेवा प्रदायक ('आईएसपी') द्वारा बनाईएको कुनै पनि कार्यवाही वा छुटका लागि जिम्मेवार हुनुपर्नेछ, जसमा खेलाडीले सूर्य पैलेस क्यासिनो.ईउलाई पहुँच प्राप्त गर्न अनुबंध गरेका छन् र सूर्य पैलेस क्यासिनो प्लेयर र आईएसपी को बीच कुनै विवाद को एक पार्टी, न त यस तरिका को यो विवाद को तहत प्लेयर या सूर्य पैलेस कैसीनो को दायित्वहरुमा कुनै पनि असर छैन।
प्रतिलिपि अधिकार र ट्रेडमार्क
प्लेयरले सूर्य पैलेस क्यासिनो अपरेसन र सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित सबै लागू प्रतिलिपि र / वा ट्रेडमार्कहरूको आदर गर्न र एन्क्रिप्शन कुञ्जी र अन्य सुरक्षा उपायहरूको प्रयोगमा आवश्यक आवश्यक सबै व्यायाम गर्न प्रयोग गर्दछ।
प्लेयर द्वारा दुर्व्यवहार
त्यसो भए कि सूर्य पैलेस क्यासिनोले विश्वास गर्दछ कि खेलाडीले बोनस वा दुरुपयोगको दुरुपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, वा दुर्व्यवहार वा राम्रो विश्वासको अभावले सूर्य पैलेस क्यासिनोद्वारा स्वीकृत एक गेमिंग नीतिबाट फाइदा उठाउन सक्छ। यसको पूर्ण विवेक, कुनै पनि बोनस वा अन्य पदोन्नतिलाई प्लेयर, इन्कार, हटाउन वा हटाउनुहोस्, वा प्लेयरको सन्दर्भमा कुनै पनि नीतिलाई रिसेन्ड गर्नुहोस्, अस्थायी रूपमा वा स्थायी रूपमा।
खेलाडीले कुनै पनि समयमा कुनै पनि कारणले सूर्य पैलेस क्यासिनोलाई पैसा नदिने बताए, खेलाडीले सूर्य क्यासिन क्यासिनोलाई कुनै पनि समयमा लिखित रूपमा यो सम्झौता समाप्त गर्न सक्दछ।
सूर्य प्यालेस क्यासिनो प्लेयरको सदस्यता समाप्त गर्न अधिकार छ, कुनै पनि समय र कुनै कारणले, आफ्नो मात्र विवेकमा, र विशेष रूपमा कुनै पनि गतिविधिको स्थितिमा जुन सूर्य पैलेस क्यासिनो र / वा यसको सदस्यहरू हानिकारक हुन सक्छ, तर यो सीमित छैन , धोखाधडी, बोनस र अन्य पदोन्नतिको दुरुपयोग, भ्रामक र अप्रत्याशित दावीहरू, र सूर्य पैलेस कैसीनो सफ्टवेयरको दुरुपयोग।
माथिको रूपमा प्लेयर वा सूर्य पैलेस क्यासिनोको समाप्तिमा, सूर्ल प्यालेस क्यासिनोले कुनै पनि फाईललाई फिर्ता दिनेछ, जुन प्लेयरको खाता माथि र माथिको कुनै पनि राशिमा हुन सक्छ, जुन सूर्य पैलेस क्यासिनो (यदि कुनै हो भने) हुन सक्छ। कुनै पनि अवस्थामा, फिर्ती प्लेयर द्वारा बनाईएको प्रारम्भिक जम्मा भन्दा बढी हुनेछैन।
माथिको रूपमा प्लेयर वा सूर्य पैलेस क्यासिनोको समापनले यस करारको आधारमा अन्य पक्ष द्वारा कानुनी रूपमा कुनै पनि रकमको वाहेक पार्टीको पुन: प्राप्ति गर्न पूर्वाग्रह बिनाै पर्छ।
लागू कानून / न्यायक्षेत्र
यो सम्झौता, यसको व्याख्या र कार्यान्वयन र पार्टनरहरूको सम्बन्ध सम्बन्धी शासन गरिनेछ, र अनुसारको नियम संयुक्त राज्य.
कुनै पनि दावी वा विवाद वा प्रत्यक्ष रूपमा वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस सम्झौताबाट उत्पन्न हुन्छ, पनामाको योग्य अदालतको सामु ल्याइनेछ जुन अदालतको विशेष अधिकार क्षेत्र हुनुपर्छ। अग्रगामी, सूर्य पैलेस क्यासिनो को प्लेयरको गृह अधिकार क्षेत्र वा अन्य ठाउँमा योग्य न्यायालय अघि खेलाडी विरुद्ध कुनै पनि कानूनी कार्यवाहीको अधिकारको अधिकार छ।
सूर्य प्यालेस क्यासिनोले यी सर्तहरू र नियमहरू समय समयमा समय परिवर्तन गर्न अधिकार सुरक्षित गर्दछ जस्तो देखिन्छ। खेलाडीले यी सर्तहरू र सर्तहरू समीक्षा गर्न सल्लाह दिएको छ कि सूर्य पैलेस क्यासिनो.ई. वेबसाइटको प्रति प्रति महिना कम से कम एक महिनाको लागि कम्तिमा पनि कस्तो संशोधन, यदि कुनै पनि बनाइएको हो।
यस सम्झौता प्रमाणित गरिएको छ र सूर्य प्यालेस क्यासिनो द्वारा हस्ताक्षर गरिएको छ र सफ्टवेयरको रूपमा वर्णन गरिएको छ कि सफ्टवेयरले कुन तरिकामा प्रयोगकर्ता द्वारा पहिलो लगाइएको छ जुन DATE मा प्रमुख सर्तहरू र शर्तहरू बीचको परिचय पालना गर्दछ।
तपाईंको टाउकोको साथ यो सुन्नुहोस्। हामी सूर्य पैलेस क्यासिनोमा गहिरो महसुस गर्छौं कि यदि तपाईं सोच्नुहुन्छ कि तपाईं, वा एक पारिवारिक परिवार सदस्य, एक जुमबत्तीको समस्या छ कि तपाईं सभामा भेट्टाउन सक्नुहुनेछ। तपाईं GAMBLERSANONYMOUS.ORG मा पाउन सक्नुहुन्छ
सूर्य प्यालेस खेल्नुहोस्
सूर्य दरबार क्यासिनो बोनस कोड
कुल कूपन: 9,169
65X ब्यागर ager 80000 अधिकतम CashOut अतिरिक्त बोनस: फल मशीनमा 665 मा 27% उत्तम साइनअप बोनस क्यासिनो ... अधिक ››
$ 2180 जम्मा कैसीनो बोनस छैन
X 55X € १170000०००० अधिकतम क्यासआउट अतिरिक्त बोनस मार्फत खेल्नुहोस्: gu 370० नि: शुल्क चिप क्यासिनो पेन्गुइन स्प्लैश रब्याट स्लट खेलमा ... अधिक ››
EUR 255 नि: शुल्क कैसीनो टिकट
45X through 10000 अधिकतम नगद मार्फत बाहिर खेल्नुहोस् अनन्य बोनस: २१० स्प्रि Sk स्काइस् स्पिनोमोनल क्यासिनो स्लॉटहरूमा नि: शुल्क स्पिनस क्यासिनो ... अधिक ››
X०X ब्याजेरिंग युर १ 30००० अधिकतम फिर्ता रकम विशेष बोनस: २ 175000 free नि: शुल्क स्पिनहरू गोल्डन इजिप्ट इजीट स्लट खेलमा ... अधिक ››
£ 820 जम्मा रकम बोनस कोड
X०X ब्यागरमा EUR 30२००० अधिकतम CashOut अनन्य बोनस आवश्यकता: 42000१०% हटशट Simbat मा क्यासिनोमा खेल ... अधिक ››
EUR 295 फ्री कैसीनो चिप
X 66x दांव आवश्यकता € १178000००० अधिकतम निकासी विशेष बोनस: यूरो 490 XNUMX ० मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेन्ट मैजिक क्यासिनो स्लटमा ... अधिक ››
X०x क्यासिनो मार्फत खेल्नुहोस् € cash 50००० अधिक नगद अतिरिक्त क्यासिनो बोनस: free० नि: शुल्क स्पिनहरू कुनै इजाजत स्ट्रिकमा कुनै जम्मा क्यासिनो ... अधिक ››
X० एक्स दांव आवश्यकता £ 60£838000००० अधिकतम निकासी अतिरिक्त बोनस: $ १145 मोबाइल फ्रीरोल स्लट टूर्नामेंट इन मनी सिम्बाटमा ... अधिक ››
60x Wagering € 923000 अधिकतम निकासी अतिरिक्त क्यासिनो बोनस: off 610 हफ स्लट मा दैनिक फ्रीरल स्लट प्रतियोगिता ... अधिक ››
X 55x दांव आवश्यकता £ 892000 995२००० अधिकतम निकासी अतिरिक्त बोनस: ro XNUMX€XNUMX स्क्रोजमा क्यासिनो टूर्नामेन्ट ... अधिक ››
$ 1295 NO DEPOSIT CASINO बोनस
X 35x EUR २241000१००० को माध्यमबाट प्ले गर्नुहोस् अधिकतम निकासी अनन्य बोनस: 615१XNUMX% साइनअप क्यासिनो बोनस फ्रेकी फलहरू गेमसोस क्यासिनो स्लटहरूमा ... अधिक ››
EUR 295 FREE CHAS CASINO
X 33x Wagering EUR 788000 205००० अधिकतम CashOut अनन्य क्यासिनो बोनस: २०XNUMX% क्यासिनो बोनस अलाडिन्स लैम्प Cayetano क्यासिनो स्लॉट मा स्वागत छ ... अधिक ››
X Casx क्यासिनोको माध्यमबाट यूरो 65१918000००० अधिकतम क्यासआउट स्पेशल बोनस: यूरो 610१० नि: शुल्क क्यासिनो टुर्नामेन्ट राइजिंग सन Re रीलिस् क्यासिनो स्लॉटलाई सौसाइफ ... अधिक ››
X 35x दांव आवश्यकता $ 426000२655००० अधिकतम निकासी अतिरिक्त बोनस: et 27$XNUMX अनलाइन क्यासिनो प्रतियोगिता मीठा २ Swe मा ... अधिक ››
X 44x ब्याजर आवश्यकता € 462000€२००० अधिकतम क्यासआउट अनन्य बोनस: 625२XNUMX% पहिलो जम्मा बोनस स्टीम टावर नेन्ट स्लट खेलमा ... अधिक ››
66x Wagering ring 341000 अधिकतम निकासी विशेष बोनस: men 245 फायरमेन मा क्यासिनो चिप ... अधिक ››
44X Wagering ring 392000 अधिकतम निकासी अतिरिक्त बोनस: Wild 4355$XNUMX Wild वन्य बिरालो क्यान्यनमा कुनै जम्मा बोनस क्यासिनो छैन ... अधिक ››
X०X ब्याजिंग यूर १ 40००० अधिकतम फिर्ता रकम अतिरिक्त बोनस: यूरो ११ 148000 नि: शुल्क चिप ओलम्पस स्लटल्याण्डमा ... अधिक ››
X 44X ब्याजर आवश्यकताहरू $ $१ 519000००० अधिकतम CashOut विशेष बोनस: $ 4355$XNUMX Cra क्रेजी रत्नहरूमा कुनै जम्मा क्यासिनो बोनस छैन ... अधिक ››
पाउन्ड 650 नि: शुल्क चिप क्यासिनो
X 35x ब्याजर यूआर 728000२2125००० अधिकतम नगद अतिरिक्त बोनस: Golden २१२ Golden गोल्डन माने नेक्जेजेन गेमि Sl स्लट गेममा कुनै जम्मा बोनस छैन ... अधिक ››
X 35x € 703000०515००० अधिक फिर्ता रकम अतिरिक्त बोनस मार्फत खेल्नुहोस्: ter१XNUMX% बोनस दानव लडाईमा बोनस ... अधिक ››
65X क्यासिनो मार्फत खेल्नुहोस् $ 551000 अधिकतम CashOut अनन्य बोनस: डायमंड टावर लाइटनिंग बक्स स्लट खेलमा यूरो 800 क्यासिनो टूर्नामेंट ... अधिक ››
X 65X € 531000€१००० अधिक फिर्ता रकम थप बोनसको माध्यमबाट खेल्नुहोस्: गोल्डन एकोर्न क्यासिनो टेक्नोलोजी स्लट मेसिनमा 395 XNUMX XNUMX क्यासिनो चिप ... अधिक ››
X 77X क्यासिनोको माध्यमबाट खेल्नुहोस् € 642000२००० अधिक नगद अतिरिक्त बोनस: २ 290 ० नि: शुल्क स्पाइनहरू आर्चर प्लेटेक क्यासिनो स्लॉटहरूमा कुनै जम्मा छैन ... अधिक ››
यूरो 2580 कुनै जम्मा बोनस छैन
X०X bon 30$448000०० अधिकतम नगद मार्फत विशेष बोनसबाट प्ले गर्नुहोस्: डु Rock्गामा रकमा $ १165 नि: शुल्क चिप ... अधिक ››
55x क्यासिनो यूआर १०१००० अधिकतम क्यासआउट अतिरिक्त बोनस मार्फत खेल्नुहोस्: ter 101000€3445 But बटरफ्लाइ तातो २० जियस प्लेमा कुनै बोनस जमा छैन ... अधिक ››
X०X EUR 50२724000०००० मार्फत खेल्नुहोस् अधिकतम क्यासआउट अनन्य क्यासिनो बोनस: १ 195%% क्यासिनो खेल बोनस ओलम्पस प्लेटेकको ईश्वरको राजकुमारको उमेरमा ... अधिक ››
60x $ 46000 अधिकतम CashOut अतिरिक्त बोनस मार्फत खेल्नुहोस्: free 85 नि: शुल्क स्पिन्स आयरिश लक प्लेटेकमा कुनै जम्मा छैन ... अधिक ››
X 77x क्यासिनो EUR २274000००० अधिकतम निकासी अतिरिक्त क्यासिनो बोनसको माध्यमबाट खेल्नुहोस्: Dest १०€ नि: शुल्क क्यासिनो टिकट डेस्टिनी बल्ली स्लट खेलको तरबारमा ... अधिक ››
X 66 एक्स ब्यागर $ 887000$2145००० अधिक नगद अतिरिक्त बोनस: £ २१3० कुनै डिपोजिट क्यासिनो बोनस नाइट स्लट BXNUMXw क्यासिनो स्लटहरूमा ... अधिक ››